Rutilated Topaz irbad-sida video misnomer Limonite
Rutilated Topaz irbad-sida inclusions hurdiga ah ee Limonite macdanta. Rutile Topaz waa mid aad la mid ah muuqaalka inay Rutilated quartz, sidaa magaca Rutile Topaz. Si kastaba ha ahaatee, magaca waa misnomer ah, tan iyo markii uu ka duwan Rutilated quartz taas oo uu leeyahay inclusions of Rutile macdanta, ka inclusions of Rutile Topaz aan Rutilated Topaz laakiin Limonite.
Orange iyo tobasiyos, sidoo kale loo yaqaan tobasiyos qaali ah, waa birthstone dhaqanka November, astaanta iyo saaxiibtinimo, iyo gemstone state of state ee Maraykanka ee Utah ee.
tobasiyos Blue waa gemstone gobolka ee gobolka Texas ee dalka Maraykanka ka. Dabcan dhaca iyo tobasiyos buluug waa arrin naadir ah. Sida caadiga ah, wax huruud ah iyo buluug midab, boor ama cirro waa kulaylka loola dhaqmo iyo gubaa in ay soo saaraan a madow buluug dheeraad ah la doonayo.
Brazil waa mid ka mid ah soo saarayaasha ugu weyn ee tobasiyos, qaar ka mid ah kiristaalo tobasiyos cad ka pegmatites Brazil ay gaari karaan size dagax weyn markaad beehaysaan kuna boqolaal pounds. Kiristaalo of size this waxa loo arki karaa in uu uruuriyaa museum. The Topaz of Aurangzeb, lagu arkay by Jean Baptiste Tavernier miisaamay 157.75 carats. The American Golden Topaz, jawharad a more dhawaan, miisaamay ah carats 22,892.5 weyn. Large, tijaabooyinka, iyo tobasiyos buluug cad ka anigaa St. Anns ee Zimbabwe ayaa lagu helay in ay 1980s daahay.
Tags Danburite, Rutilated
Quartz Lemon waa la rutay
Tags Lemon, Quartz, Rutilated